“” လိုးသူ ခံသူ စိတ်ကြည်ဖြူ “” – Grab Love Story
“” လိုးသူ ခံသူ စိတ်ကြည်ဖြူ “”
အိမ်မှာ ကျွန်နော် ရယ် ကျွန်နော့် ခယ်မလေး သက်မွန်ရယ် ကျွန်နော့် ယောက်ဖ ရဲ့ မိန်းမ ဇင်ဇင် ရယ် သုံးယောက်ပဲ ရှိတယ် ။ ကျန်တဲ့ အိမ်သားတွေ အကုန် ဘုရားဖူး ထွက်သွားကြတယ် ။ ကျွန်တော် က အစိုးရ ၀န်ထမ်း ခွင့်မရတာ နဲ့ မလိုက်ဖြစ်ဘူး သက်မွန်နဲ့ဇင်ဇင် က အထည်ဆိုင် မှာ အရောင်းစာရေးမ လုပ်နေကြတာ ဆိုတော့ သူတို့ လည်း ခွင့်မရတာ နဲ့ မလိုက်သွားဖြစ်ခဲ့ဘူး ။
ဇင်ဇင်က သူယောက်ကျား ကျွန်နော့ ယောက်ဖ စင်္ကာပူ မှာ အလုပ်သွားလုပ်ကတည်းက အိမ်မှာ လာနေဖြစ်တာ ခြောက်လ လောက်ရှိပီ ။အိမ်မှာ နေရင်းနဲ့ပဲ ခယ်မလေး သက်မွန် အလုပ်လုပ်နေတဲ့ အထည်ဆိုင်မှာ အရောင်းဝန်ထမ်း အဖြစ် သူပါ ၀င်လုပ်နေတာ ။ ခယ်မလေး သက်မွန် က ပိန်ပိန်သွယ်သွယ် ဇင်ဇင်က တော့ သိပ်မပိန်ဘူး အရမ်းလည်း မ၀ဘူး ။
ကိုယ်လုံးကိုယ်ပေါက်က ဇင်ဇင်က ပိုကြည့်ကောင်းတယ် ။ တင်တွေရင်တွေ ထွက်တယ် ကြည့်ကောင်းတယ် ။ သက်မွန်ကတော့ နဲနဲ ပိန်တယ် ဒါပေမယ့် သက်မွန်နဲနဲခေတ်ဆန်တယ် အတို အကြပ်လေး တွေ ၀တ်တတ်တယ် ။ ဇင်ဇင်ကတော့ အိမ်ထောင်သည် မို့လားမသိ မြန်မာဝတ်စုံ ပဲ အ၀တ်များတယ် ။
ကျွန်နော့် ယောက်ဖ နဲ့ ရပီး လေးလကျော်လောက်မှာ ယောက်ဖ က ပြည်ပ ထွက်သွားတာ ။ အခု ထိ ငွေ သိပ်မပို့နိုင်သေးတော့ ဇင်ဇင်လည်း ကျွန်နော့် အိမ်မှာ ပဲလာနေဖြစ်တယ် ။ အိမ်မှာ က မိန်းမရယ် ကျွန်နော်ရယ် ကျွန်နော့် အမေ ရယ် ကျွန်နော့် ညီမရယ် ခယ်မလေး သက်မွန်နဲ့ ဇင်ဇင် တို့နေကြတာ ။
အခု ကျန်တဲ့သူတွေ အားလုံး ဘုရားဖူး ထွက်သွားကြတာ ဆယ်ရက်လောက်ကြာမယ် ။ အခု ကျွန်နော်တို့ သုံးယောက်ပဲကျန်ခဲ့တာပေါ့။ လွန်ခဲ့တဲ့ သုံးလေးလ လောက်ကတည်းက ကျွန်နော် သတိထားမိတာ ကျွန်နော့် ကို ဇင်ဇင် တစ်ယောက် အထာတွေ ခင်းကျင်းနေသလိုပဲ ။ လူလစ်ရင်လစ်သလို အကြည့်တွေ က တမျိုးပဲ ။
ကျွန်နော် လည်း မိန်းမ ရှိပေမယ့် ဇင်ဇင်ကို စိတ်ဝင်စားနေမိတာ ။ လူလစ်ရင် ကျွန်နော့် ရှေ့မှာ ထမိန် ဖြန့်ဖြန့် ပီး ၀တ်ပြတာ ခနခန ။ အသက် ၂၆ ပဲရှိသေးပီး ယောကျား နဲ့ ခန ပဲ တူတူ နေလိုက်ရတဲ့ သူ့ အတွက် တခုခု လိုနေမှာ ကျွန်နော် သိတာပေါ့ ။ ဒါပေမယ့် အိမ်မှာ က လူက သိပ်မလစ်ဘူး ။
ဒီနေ့ စနေနေ့ ဆိုတော့ ကျွန်တော်က ရုံးပိတ်လို့ အိပ်ယာ နောက်ကျမှ ထဖြစ်တယ် ။ မိန်းမ လည်း မရှိတာ နဲ့ အေးဆေး နှပ်နေတာ ။ ကိုးနာရီလောက် ကျမှ အိပ်ယာ ထ မျက်နှာသစ်ပီး တခုခု စားမလို့ မီးဖိုချောင်ထဲ ၀င်လိုက်တော့ ဇင်ဇင်ကို တွေ့လိုက်မယ်တယ် ။ အလုပ်မသွားဘူးလား မသိ ။ ခယ်မလေး တော့ အရိပ်အယောင် မတွေ့ရ ။
ဇင်ဇင် အလုပ်မသွားဘူးလား သက်မွန်ရော
မသွားဘူး ကိုရဲ သက်မွန်က သွားတယ် ဇင်က ဒီနေ့ နားချင်လို့ မနေ့ကတည်းက ခွင့်တိုင်ခဲ့တာ
ကျွန်နော် ဇင်ဇင်ကို တစ်ချက်ကြည့်လိုက်တယ် ။ သနပ်ခါး ပါးကွပ်ကြားလေးနှင့် ဆံပင်တွေ ကို နောက်လှန်စည်းထားတယ် ။ အပေါ်က တီရှပ် အကြပ်လေးနှင့် အောက်က ထမိန် အပြာရောင် အပျော့သားလေး နှင့် ချစ်စရာ ကောင်းနေတယ် ။
ကိုရဲ ကလည်း မြှောက်နေပြန်ပီ ဘာစားချင်လို့လဲ ဇင်ဒီနေ့ အလုပ်နားတာ စားချင်တာရှိကျွေးပါ့မယ် ခုလည်း ဘရိတ်ဖတ် ပြင်ပေးထားပါတယ် စားလိုက်ဦး
တကယ် စားချင်တာ ကျွေးမလို့လား
ကျွေးမှာပေါ့ ကိုရဲ က ဘာစားချင်လို့လဲ
ညူတူတူ မျက်လုံးရွဲ ဖြင့်ကျွန်နော့် ကိုကြည့်ပြောတယ် ။
ဇင်ဇင် ကျွေးတာပဲ စားမှာပါ မြှောက်ပြောတာ မဟုတ်ပါဘူး တကယ်လှ လို့ လှတယ် ပြောတာပါ မျက်နှာကလည်း သနပ်ခါးလေး နဲ့ ချစ်စရာ ခန္ဒာကိုယ်ကလဲ စွဲဆောင်မှု ရှိတယ်လေ
မမမိုးလောက် မလှပါဘူးနော် .. ဟုတ်တယ်မလား
ဟုတ်တယ် ကျွန်နော့် မိန်းမ မိုးမိုးလွင် လောက်တော့ မလှပါ ။ ကျွန်နော့် မိန်းမ ကို မမမိုး လို့ ခေါ်ကြတယ် ။ ကျွန်နော့် မိန်းမ က နန္ဒာလှိုင် တို့လို ဘော်ဒီမျိုး မြန်မာဆန်ဆန် ၀တ်ထားလိုက်ရင် အပြင်ထွက်ရင် လူတွေတော်တော်ငေး ။ ကျွန်နော် လည်း အဲ့အလှ ကို စွဲ မက်လွန်းလို့ မိုးကို မရမက ခိုးပြေးပီး ယူထားတာလေ ။
လှပါတယ် မိုးက လည်း အလှ တမျိုးပေါ့ ဇင်ဇင်က လည်း အလှတမျိုး စွဲ ဆောင်မှု တမျိုးပေါ့ နှစ်ယောက်လုံးလှပါတယ်
ကဲ ဟုတ်ပါပီ ကိုရဲ ရယ် နှစ်ယောက်လုံး လှ တယ်ဆိုလို့ မမမိုး လိုပဲ ကိုရဲ စားချင်တာ ကျွေးပါ့မယ် ရော့ လောလော ဆယ် ထမင်းကြော် နဲ့ ကြက်ဥကြော် ထားတယ် ကော်ဖီ လဲ ဖျော်ထားပီးပီ စားလိုက်ပါဦး
ကျွန်နော့် အတွက်ထမင်းကြော် ပန်းကန်တွေ ပြင်ပေးပီး သူနဲ့ သက်မွန် အိပ်တဲ့ အခန်းဘက်ကို လှုပ်လီလှုပ်လဲ့ ဖြင့် ထွက်သွားတယ် ။
နောက်ပိုင်း အလှ ကို ကြည့်ဖြစ်အောင် ကြည့်မိလိုက်သေးတယ် ။ ထမင်းကြော် စားရင်း ကျွန်နော် စဉ်းစားနေမိတယ် ။ ဒီနေ့ အိမ်မှာ ကျွန်နော် တစ်ယောက်တည်း ကျန်နေမှာ လဲ သိနေတယ် ဇင်ဇင် အလုပ် ဘာကြောင့်မသွားတာလဲ ။
စကားတွေက လဲ အထာတွေ ပေးနေတယ် ။ ကျွန်နော့် ဘက်က စလိုက်ရင် ပါလာ ဘို့ ကျိန်းသေ သလောက်ရှိတယ် ။ တစ်ယောက်ယောက် သိသွားမှာလဲ စိုးရိမ်တယ် ။ စမ်းလည်းစမ်းကြည့်ချင်တယ် ။ နောက်ဆုံး ဘရိတ်ဖတ်စားတာ လက်စသတ် လိုက်ပီး ဆုံးဖြတ်ချက်ချလိုက်တယ် စမ်းကြည့်မယ်ပေါ့ ။
ထမင်းစားပွဲ က ထပီး ဇင်ဇင်ရှိရာ အခန်းဘက်သို့ လာခဲ့လိုက်တယ် ။ခန်းစည်းစလေး အသာ လှပ်ကြည့်လိုက်တော့ အိပ်ယာပေါ် မှာ ပက်လက်လှန်ပီး စာစောင် ဖတ်နေတာ တွေ့လိုက်တယ် ။ ကျွန်နော့် ကို မြင်တော့
ကိုရဲ ဘာလိုချင်လို့လဲ ဇင်ဘာလုပ်ပေးရမလဲ
ရပါတယ် ဇင်ဇင် လည်း ပျင်းနေမလားလို့ စကားပြောရအောင်လို့ ကိုကြီးလဲ တစ်ယောက်တည်း ပျင်းနေလို့ ၀င်ခဲ့မယ်နော်
ကုတင်ပေါ်က တင်ပြင်ခွေလေး ထထိုင်တယ် ။ ကျွန်နော်လည်း သူ့ ကုတင်ပေါ်မှာပဲ တူတူ ထိုင်လိုက်ပီး ရောက်တက်ရာရာတွေ ပြောနေလိုက်တယ် ။ ရီစရာတွေ ပြောရင် ဇင်ဇင်က လိုက်ရီ ပီး ကျွန်နော့် ပေါင် တို့ ပုံခုံး တို့ ကို လာလာ ပုတ်တယ် ။ ကျွန်နော် လည်း စကားပြောရင်းသွေးတိုး စမ်းခါ သူ့ ပုခုံးတို့ ပေါင် တို့ ကို ထိကြည့်တယ် ။ ဇင်ဇင် က မသိသလို နေတယ် ဘာမှ မပြောဘူး ။
ကျွန်နော် တို့လင်မယား မယူခင်က အကြောင်းတွေပြော သူတို့လင်မယား မယူခင်က အကြောင်းတွေ ပြောပေါ့ ။ အပြင်မှာ ချိန်းတွေ့ ကြတာတွေ ရုပ်ရှင်ကြည့်တာတွေ ပန်းခြံ သွားတာတွေ ပြော ပေါ့။ ပြောနေရင်း နဲ့ ကျွန်နော့် လက်ကို သူ့ပေါက်ပေါ် တင်ထားရင်း လက်ကို ပြန်မရုတ်ပဲ ခပ်ကြာကြာနေလိုက်တယ် ။
တအိမ်လုံးမှာ သူနဲ့ကျွန်နော် နှစ်ယောက်တည်း ဆိုတဲ့ အသိရယ် တကုတင်တည်းမှာ တူတူ ထိုင်နေတယ် ဆိုတဲ့ အသိရယ်က ရင်ထဲမှာ ရင်ခုန်နှုန်း မြန်လာစေတာတော့ အမှန်ပဲ ။ ကျွန်နော့် လက်က သူ့ ပေါင်ပေါ် မှာ ဖြေဖြေးချင်းလေး ပွတ်နေမိတယ် ။
ခနနေတော့ စကား ခန ပြတ်သွားပီး ကျွန်နော့် ကို စိုက်ကြည့်လာတယ် ။အကြည့်ချင်းတော်တော်ကြာအောင်စုံနေမိတယ် သူ့ရင်ထဲ ဘာလိုချင်နေတယ် ကျွန်နော် ရင်ထဲ ဘာလိုချင်နေတယ် ဆိုတဲ့ ဆန္ဒတွေကို တစ်ယောက်နဲ့တစ်ယောက် အသံတိတ်ပြောနေမိသလိုပဲ။
ခနတာ အခိုက်အတန့်လေးမှာပဲ ဇင်ဇင့် ကို ကျွန်နော် ဆွဲပွေ့မိလိုက်ပီး နုတ်ခမ်းတွေ နမ်းပစ်မိလိုက်တယ် ။ ထိုင်နေရာကနေ ဇင်ဇင်က ကုတင်ပေါ်မှာ ပက်လက်ကလေး ဖြစ်သွားပီး ကျွန်နော်က သူ့ အပေါ်မှာ မိုးပီး နမ်းနေမိတယ်။ ခန ကြာတော့ နုတ်ခမ်းချင်း ခွာမိလိုက်တယ် တစ်ယောက်ကို တစ်ယောက် ကြည့်နေရင်း
မမမိုး သိမှာ မကြောက်ဘူးလား
ဒါဆို ဇင်လည်း မကြောက်တော့ဘူးနော်တဲ့
အိမ်ထောင်သည်တွေပီပီ အရာရာ ကို ရှက်ရွံ့မှုမရှိ ။ တစ်ယောက်လိုအင် တစ်ယောက်သိနေပီ ဖြစ်တဲ့ အတွက် ကာမနွံထဲ မှာ ပျော်ဘို့ ဆုံးဖြတ်လိုက်တယ် ။ နှစ်ယောက်လုံး အ၀တ်အစားတွေ ချွတ်လိုက်တယ် ။။
အိုးးး လှလိုက်တဲ့ နို့သီးလေး အစို့မခံ အကိုင်မခံရတာ ကြာလို့ထင်တယ် နို့သီးခေါင်းလေး က တင်းနေတာပဲ ။ နို့ လေး တွေကို ကိုင်ညှစ်ရင်း ဘယ်ပြန်ညာပြန်စို့ပေးလိုက်တယ် . ဇင်ဇင် လက်တဘက်က ကျွန်နော့် ခေါင်းကို ကိုင်ထားရင်း လက်တဘက်က သူ အဖုတ်နေရာလေး အားပွတ်နေတယ် ။
အဖုတ်မှာ အမွှေးတွေက မထူ မပါး။ဇင်ဇင်က အသားဖြူတော့ အမွှေး မဲမဲလေးတွေက ဆီးခုံပေါ်မှာ ထင်းနေတယ် ။ နို့တွေ စို့ နေရာက နေ တဖြေးဖြေး အောက်လျောဆင်းလာပီး ဆီးခုံးပေါ်မှာ စောက်မွှေးလေးတွေ ကို လျှာ နဲ့ တချက်သပ်လိုက်တယ် ဇင်ဇင် တစ်ယောက် ခေါင်း ထောင်ကြည့်ပီး
အင်း မကြိုက်ဘူးလား ဇင် က
ကြိုက်တာပေါ့ ပီးမှ ကိုရဲ ကိုလည်း ပြန်မှုတ်ပေးမယ်
ပောပြောဆိုဆို ပေါင်ကို ပိုကားလိုက်ပီး တင်ပါအောက် ကို ခေါင်းအုံး ခုလိုက်တယ် ။ အဖုတ်က ပြူထွက်လာတယ် ။
ကျွန်နော့် ခေါင်းကို လက်နှစ်ဘက်နဲ့ ကိုင်ပီး သူ့ စောက်ဖုတ်ပေါ် ဖိကပ်လိုက်တယ် ။ အသက်ရှုတောင် နဲနဲ ကြပ်သွားတယ် အဖုတ်မှာ စောက်ရည်တွေ က ရွဲနေပီ ။ အဖုတ်ကြီး ကို ကော့ကော့ပေးရင် ကျွန်နော်ယက်ပေးတာ ကို ခံနေတယ် ။ ပါးစပ်က လည်း တအင်းအင်း နဲ့ ညီးနေပီ။
အင်းးး အားးး ကိုရဲ အားးး ကောင်းတယ်ကွာ အားး မှုတ်ပါ ယက်ပါနော် အားးး
ပလတ် ပလတ် ပြွတ် ပြွတ်
အဖုတ် တပြင်လုံး ယက်လိုက် စောက်ပတ်နုတ်ခမ်းသားတွေ ဖြဲပီး အတွင်းကို လျှာ နဲ့ ထိုးပေးလိုက် စောက်စိ ကို သာသာလေး ကိုက်လိုက် ဖြစ် ယက်ပေးနေမိတယ် ။ ဆယ်မိနစ် လောက် ယက်ပေးပီး ကျွန်တော် ထထိုင်လိုက်တယ် ပါးစပ်မှာ ပေနေတဲ့ သူ့ စောက်ရည်နဲ့ တံတွေး တွေ ကို ဘေးနားက ခုနက ချွတ်ထားတဲ့ သူ့ ထမိန် အပြာရောင်လေး ကို ဆွဲယူပီး သုတ်လိုက်တယ် ။
ဇင့် စောက်ပတ်က သိပ်မပြဲသေးဘူးနော် မှုတ်လို့ကောင်းတယ်
ပြဲမလား ကိုရဲ ကလဲ မလုပ်ဖြစ်တာ ပဲကြာနေပီ ကို
ဇင့် ယောက်ျား ကော အခု လို မှုတ်ပေးလား
လာ ..အခု ဇင့် အလှည့် ကိုယ်လဲ အရမ်းခံချင်နေပီ ဇင့် နုတ်ခမ်းလှလှ လေး နဲ့ လွေပေးတော့
ချက်ချင်းပဲ ပက်လက်လှန်နေရာက နေ ထ လာပီး ကျွန်နော့် လီး ကို ကိုင်တယ် ။ ကျွန်နော် လည်း ပက်လက်လှန်ပေးလိုက်တယ် ။ ကျွန်နော့် လီး ကို လက်နဲ့ တစ်ချက်နှစ်ချက် ဂွင်းထုပေးပီး လီးပေါ် ကို တံတွေး ပျစ်ကနဲ ထွေးလိုက်တယ် ။
သူ့လက်ထဲမှာ ကျွန်နော့် လီး က သူ့တံတွေး နဲ့ ချောမွတ်လာတာ ကို ဂွင်းထု ပေးနေရင်း ကျွန်နော့် ကို တချက်ကြည့်တယ် ။ ပီးတော့ အောက်ကို ငုံလိုက်ပီး လွေတော့တာပဲ ။
ယောင်္ကျား နဲ့ ဘယ်လောက်တောင် ပွင့်ပွင့်လင်းလင်း နေခဲ့တယ် မသိ ။ အမှုတ် အရမ်းကောင်းတယ် ။ လီးဒစ်ကို လျှာ နဲ့ ရစ်ပတ်လိုက် ဥတွေကို ပွတ်လိုက် လီးထိပ်ကို နုတ်ခမ်းနဲ့ ပွတ်လိုက် တစ်ချောင်းလုံး ငုံ စုပ်လိုက်ဖြင့် သူ့ရဲ့ ကျွမ်းကျင်မှုအောက်မှာ ကျွန်နော် လူးလိမ့်နေတာပဲ။
အားးး ကောင်းလိုက်တာ ဇင်ရယ် ကျွမ်းကျင်လိုက်တာ ကိုယ့်မိန်းမ ထက်တောင် ကောင်းနေတယ် ` ဇင်ဇင့် ခေါင်း ကို ကိုင်ပီး လီး ကို အထုတ်အသွင်း လုပ်ပေးနေလိုက်တယ် ပြွတ်ပြွတ်ပြွတ်အု…အု…အု လီးအရင်းမှ ထိပ်ဖျားထိ လျှာ အပြားလိုက် ယက်လိုက် ဥတွေကို ငုံစုပ်လိုက်ဖြင့် အားရပါးရ ကျွမ်းကျင်စွာ စုပ်ပေးယက်ပေးနေတော့တယ် ။ အစက အဲ့လောက်တောင် ကျွမ်းကျင်မယ် မထင်ခဲ့ ။ မြန်မာဝတ်စုံလေး ဖြင့် သာ နေတတ်သူတစ်ယောက်မို့ ဒီဘက်ပိုင်း မှာ အဲ့လောက်တောင် ထန်မယ် မထင်ခဲ့ ။ အခု လို အိမ်ထောင်သည် တွေ ပီပီ လွတ်လွတ်လပ်လပ် ခံစားချိန်မှာတော့ ဇင်ဇင့်ရဲ့ အစွမ်းအစ က ကျွန်နော် တောင်လက်ဖျား ခါလောက်အောင် ကောင်းလွန်းလှနေတယ် ။ ဆယ်ငါးမိနစ်လောက် ကြာအောင် စုပ်ပေးပီး ကျွန်တော် တောင် ပီးချင်ချင် ဖြစ်သွားတယ်.. ဇင်ဇင် ကိုယ် လိုးချင်ပီကွာ ဆက်မှုတ်နေရင် ပီးသွားလိမ့်မယ်အင်းးး အသင့်ပါပဲ ကိုရဲ..ဇင် ဘယ်လိုနေပေးရမလဲဘေးတစောင်းလှဲ အိပ်လိုက်နော် အင်းး ဇင်ဇင်က ဘေးတစ်စောင်းလှဲ အိပ်ရင်း တင်ပါးကြီး ကို ကျွန်နော့် ဘက် ကော့ပေးလိုက်တယ်။ ဇင်ဇင့် ပေါင်တစ်ချောင်း ကို အသာလေး မ ရင်း ကျွန်နော့် လီးတံ ကို အဖုတ်ဝ မှာ တေ့လိုက်ပီး နှစ်ချက်သုံးချက်လောက်ပွတ်ဆွဲ ပေးလိုက်တယ် ။ ကျွန်နော့် လက်တစ်ဘက်က ဇင်ဇင် ကိုယ်လုံးအောက်က နေလျှိုဝင်ပီး နို့သီး ကို ဖျစ်ညှစ်ပေးနေလိုက်တယ် ။ ကိုရဲ ..လိုးတော့ကွာ ..ဇင် မနေနိုင်တော့ဘူး ထည့်လိုက်တော့နော် အင်းးး ဒါဆို ထည့်ပီနော်ပလွတ်…အ..အ ပလွတ် ကနဲ မြည်သံ နှင့် အတူ ဇင်ဇင့် စောက်ဖုတ် ထဲကျွန်တော့ လီး တံ ဒစ်ဖျား မြုပ် ၀င်သွားတယ် ။ ဖြေးဖြေး ချင်း သွင်းလိုက်ထုတ်လိုက် လုပ်ပေးနေပေမယ် ဘေးတစောင်း လိုးနေတာ မို့ လီး တစ်ချောင်းလုံး အဆုံးထိတော့ မ၀င်ဘူး ။ တစ်ဝက်ကျော်ကျော်လောက်သာ ၀င်ထွက် လိုက်ဖြင့် စည်းချက်ညီညီ လှုပ်ရှားနေမိတယ်။ ဇင်ဇင် တအီးအီး တအားးအားး ဖြင့် ညီးညူရင်း တင်ပါးကြီးတွေ ကို လည်း နောက်ဘက်ကို ပြန်ပြန်စောင့်ပေးနေတယ် ။ ဘွတ်..ဘွတ်..ဘွတ်ဖတ် ဖတ်ဖတ်…အားးးအ..အ. အ. ကောင်းတယ် ကိုရဲ ခပ်ပြင်းပြင်းလေး ..အားးး ```အင်းးးအင်းးးအားးး အု..ရော့ အားးး
ဖွတ် ဖွတ် ဖွတ် ..ဖတ် ဖတ် ဖတ်
ဇင်.. ဖင်ကုန်းလိုက်ကွာ ဖင်ကုန်းပီး တက်ချချင်တယ်
အင်း ကိုရဲ သဘော ကုန်းလိုက်မယ်နော်
ဇင်ဇင် က ဖင်ကို ကုန်းပေးလိုက်တယ် ။ဇင်ဇင့် နောက်မှာ ဒူးထောက်ပီး အဖုတ်ဝ မှာ တေ့ပီး
တင်ပါး နှစ်ခြမ်း ကို ကိုင်ကာ လီး စောင့်ထိုးသွင်းလိုက်တယ်
အားးးးထိတယ် အ အားးး အားး
ဘွတ် ဘွတ် ဖတ် ဖတ် ဖတ်
ဖုတ် ဖူတ် ဖုတ် ဘွတ် ဘွတ် ဘွတ်
အားး ကိုရဲ ကောင်းလိုက်တာ လိုးပါ အားးး ဇင့်ကို လိုးပါ
ဇင်ဇင့် တင်ပါး နဲ့ ကျွန်နော့် စည်းခုံ တို့ တဖတ် ဖတ် မြည်အောင် ရိုက်သံ တွေ ဆူညံအောင် ထွက်နေတယ်။
နောက်ကို ကားတင်းထွက်နေတဲ့ တင်ပါးကြီး ကို ကျွန်နော် မချင့်မရဲ တစ်ချက်လက်ဝါးနဲ့ ခပ်ပြင်းပြင်း ရိုက်လိုက်တယ်
အားးး ကောင်းတယ် ကိုရဲ အားးးး
ဖွတ် ဖွတ် ဖွတ် ဖတ် ဖတ် ဖတ်
အားးး ကောင်းလိုက်တာ ကိုရဲ မညှာ နဲ့တော့ ဇင့်ကို လိုးပါ
လက်တဘက် ဖြင့် ဇင်ဇင်က ကျွန်တော့ ဥ တွေကို ပေါင်ကြားမှ လှမ်းကိုင် ပွတ်ပေးနေတယ်။
ဇင်ဇင် တင်ပါး ကို သုံးလေး ချက် ဆက်တိုက် ရိုက်ပစ်လိုက်တယ် လီးက လည်း အစောင့်မပျက် .. ဇင်ဇင် တစ်ယောက် အရမ်းကောင်းနေပီး သူ့တင်ပါး မှာ ကျွန်နော့် လက်ငါးချောင်းရာ အစင်းသားပေါ်လာတယ် ။ အသားဖြူတော့ တင်ပါးက ရဲစပ်လာတယ်။
အချက်လေး ငါးဆယ်လောက် ဆက်တိုက်လိုးပစ်လိုက်ပီး ကျွန်နော့် လီးထိပ်က ကျဉ်တက်လာတယ် နောက်ဆုံး ဇင်ဇင့် စောက်ဖုတ်ထဲကို တဆုံး ထိုးသွင်း ပစ်လိုက်ပီး လီးရေတွေကို စောက်ဖုတ်ထဲ ကို ပန်းညှစ်ထုတ်ပေးလိုက်တယ် ..
`အားးးးးးး ပီးပီ…ဇင် အားးးးးးးးထွက်ကုန်ပီ
အားးးး ညှစ်ထည့်ပေး အားးးးဇင်လည်းပီးပီ အားးးးးးကောင်းတယ် ကိုရဲအားးးးးး
ဇင်ဇင် လေးဘက်ကုန်းနေရာကနေ အားပျော့ပီး ကုတင်ပေါ် မှောက်လျှက်ကျ သွားတယ် ကျွန်နော် လည်း အလိုက်သင့် ဇင်ဇင့် ကိုယ်ပေါ် မှောက်ချလိုက်ရင် လက်ကျန် သုတ်ရေ အနည်းငယ် ကို ထွက်သလောက် ပန်းထုတ်ပေးလိုက်တော့တယ်။
ဇင် ´´ ဟင် ပြောလေ ´´
ကိုယ့်မိန်းမ ပြန်မလာခင်အထိ အခုလို နေချင်တယ်ကွာ ´´ အင်း ပါ ကိုရဲကလဲ ကိုရဲ စိတ်ကြိုက်ပါ ´´
ဒါပေမယ့် သက်မွန် ရှိနေသေးတော့ ဘယ်လိုလုပ်ရမလဲ ´´ အင်းးး ´´
ဇင်ဇင် ခပ်တွေတွေ လေး စဉ်းစားနေရင်း
ကိုရဲ ´´ အင်း ပြောလေ ´´
ကိုရဲ သက်မွန်ကို စည်းရုံးကြည့်ပါလား ´´ ဟင် ဘယ်လို စည်းရုံးရမှာလဲ ´´
ဒီလိုလေ အခု ဇင် နဲ့ ကိုရဲ မှားပီးကြပီ အဲ့ဒီတော့ သက်မွန်သိသွားရင် မမမိုး ကို ပြန်တိုင်နိုင်တယ် အဲ့ဒီတော့ သူ ပြန်မတိုင်နဲ့ အောင် သက်မွန် ကို လည်း စည်းရုံးမယ်လေ ´´ အင်းလေ … ဘယ်လို စည်းရုံးရမှာလဲ သက်မွန်ကို ဖွင့်ပြောပီး ပြန်မတိုင်အောင် ပြောရမှာလား မလွယ်ဘူးထင်တယ် အကုန် ပြဿနာတွေ ရှုပ်ကုန်လိမ့်မယ် ´´
အာ ကိုရဲ ကလည်း ဝေးပါ့ .. ဇင်နဲ့ ကိုရဲ မှားကြသလို သက်မွန်ကိုလည်း အမှားထဲ တိုးဝင်ခိုင်းလိုက်မှာပေါ့ ´´ ဟင် ဘယ်လို ဘယ်လို ´´
ကဲ ဒီလောက်တောင် ပြောရတာဝေးတယ် ကိုရဲ ကလဲ ညနေ သက်မွန် ပြန်လာရင် ဇင် အပြင်ထွက်ရှောင်ပေးမယ် ကိုရဲ ဘာသာ ဘယ်လို စည်းရုံးစည်းရုံး သိပီလား ´´ ဟာ ဒါဆို ကိုရဲ …က သက်မွန်ကို လဲ အခုလို ဇင်ဇင် နဲ့ နေသလို … အဲ့လိုလား ´´
ဘာလဲ မကြိုက်ဘူးလား ´´ ဟဲဟဲ ကြိုက်တာပေါ့ ဒါပေမယ့် ဖြစ်ပါ့မလား အဆင်ပြေပါ့မလား ´´
ဒါတော့ ကိုရဲ အစွမ်းအစပေါ့ ´´ ဇင်ဇင် က မျက်စောင်းလေး တစ်ချက် ပစ်လိုက်သေးတယ် ။ ကဲ ဒါဆိုလည်း စိတ်ချ ဇင့် အကြံ အတိုင်း အောင်မြင်စေရမယ် လောလောဆယ်တော့ နောက်တစ်ချီလောက် စွဲ ရင်ကောင်းမလား ´´
တော်ပီ ကိုရဲ ညနေ သက်မွန် အတွက် အားမွေးထားလိုက်တော့ ဇင်လည်း နာနေပီ ခန နားဦးမယ် ´´ … … ညနေ လေးနာရီလောက် သက်မွန်ပြန်လာတော့ ဇင်ဇင် က အပြင်သွားဦးမယ် ဆိုပီး ထွက်သွားတယ် ။ ကျွန်နော် နဲ့ သက်မွန် နှစ်ယောက်တည်း အိမ်မှာ ကျန်ခဲ့ပီ ။ ဘယ်လို စရမလဲ စဉ်းစား ဆဲ ။ အတင်း ၀င်ကြမ်း လို့ လည်း မဖြစ် ။ ခယ်မလေး သက်မွန် ရေချိုးပီး အခန်းထဲမှာ အ၀တ်အစား လဲ နေပုံ ရတယ် ။ ကျွန်နော် ဧည့်ခန်းထဲ မှာ ထိုင်နေရင်း စဉ်းစားဆဲ ဘယ်လို စည်းရုံးရရင် ကောင်းမလဲ အဖြေက မထွက် ၊ ဒါပေမယ့် ကံကြမ္မာက ကျွန်နော့် ဘက် အရေးပေးလာတယ် အခန်းထဲမှာ သက်မွန်ထွက်လာပီး ကျွန်နော့် ဘေးနားမှာ ၀င်ထိုင်ကာ ကိုကြီး ´
ဟင် ဘာလဲ သက်မွန် ´´ ရော့ ဒါကိုကြီး စွပ်ကျယ် မလား ´´
အင်းးး ဟုတ်တယ် သက်မွန် ဘာလို့လဲ ´ မချိုမချဉ် မျက်နှာပေး ဖြင့် သက်မွန်က ဘာရယ် မဟုတ်ပါဘူး သက်မွန်နဲ့ မမဇင် အိပ်တဲ့ ကုတင်ပေါ်မှာ တွေ့လို့ ကိုကြီး များ မေ့ကျန်ခဲ့တာလားလို့ ´´
အော် …အင်းးး ဟိုလေ ..ဟို …´´ ကျွန်နော် အထစ်ထစ် အငေါ့ငေါ့ ဖြင့် ဘာပြောရမှန်းမသိ ဘာတွေ တဟိုဟို ဖြစ်နေတာလဲ ကိုကြီး မှန်မှန်ပြော ဒီနေ့ တနေ့လုံး မမဇင် နဲ့ ကိုကြီး ၂ ယောက်တည်း ကျန်ခဲ့တာ အမှန်အတိုင်းပြော မညာနဲ့´´
အင်းးး သက်မွန် …ကိုကြီး မညာချင်ဘူး အဲ့တော့ ဘယ်လို ပြောရမလဲ ဆိုတော့ ကိုကြီး နဲ့ဇင်ဇင် ….´´ ခရီးဆုံး ရောက်သွားတယ် ဆိုပါတော့ ´´
အင်း ဟုတ် ..ဟုတ်တယ် သက်မွန် ´´ လုပ်တုန်းက လုပ်ပီး ဘာကြောက်နေတာလဲ ကိုကြီး ဟွမ်း ´´
ဟိုလေ ..ဟို …´´ ကဲ ကိုကြီး ..တဟိုဟို ဖြစ်မနေနဲ့ မမဇင်က ခုန က အပြင်မထွက်ခင် မှာသွားတယ် နေ့လည်က မမဇင် နဲ့ ကိုကြီး တူတူ အိပ်ပီး ကျန်ခဲ့တဲ့ စွပ်ကျယ်လေး ပေးလိုက်ပါတဲ့ အပြင်ခန သွားပီး ပြန်လာခဲ့မယ်တဲ့ သူ့သူငယ်ချင်းအိမ် ခန သွားပီး ပြန်လာလိမ့်မယ် အပြန်ဆေးလည်း ၀င်ဝယ်ခဲ့မယ်တဲ့ ´´
ဘာဆေးလဲ ´´ အော် ကိုကြီးကလဲ တားဆေးပေါ့လို့ တော်ကြာ မမဇင် နဲ့သက်မွန် ဘိုက်ကြီး ကုန်ရင် ဘယ်လိုလုပ်မလဲ ´´
ဟင် ..မမဇင် နဲ့ သက်မွန် ဟုတ်လား ´´ ဘာလဲ မမဇင် တစ်ယောက်တည်းကိုပဲ အချစ်တွေပေးမှာလား သက်မွန်ကိုကျတော့ မပေးတော့ဘူးလား ´´
ဟင် ..သက်မွန်က ကိုကြီး နဲ့ ဇင်ဇင် ဖြစ်တာ ကို သိပီးပီပေါ့ ဟုတ်လား ´´ ဒါပေါ့ … ခုနက မမဇင် အကုန်ပြောသွားပီးပီ ..အခု သက်မွန်နဲ့ကိုကြီး ကို ဘာလို့ ၂ ယောက်ထဲ ထားခဲ့တာ ဆိုတာ ကော သက်မွန်ပြောပြရဦးမှာလား ´´
ပြောစရာ မလိုတော့ပါဘူး သက်မွန်ရယ် …´´ ကျွန်နော် သက်မွန် ခါးလေး ကိုအသာ လှမ်းဖက်လိုက်တယ် ။ ပိန်သွယ်သွယ် ကိုယ်လုံးလေး အလိုက်သင့် ပါလာတယ် ထို့နောက် နုတ်ခမ်းလေး ကို အသာ ငုံစုပ်လိုက်တော့တယ် ပြွတ် ပြွတ် ပြွတ် ´´
သက်မွန် ရဲ့ အနမ်းတွေက ဇင်ဇင် ထက်တောင် သာသေးတယ် ။ ကျွမ်းကျင်လှတယ် ။ ပါးစပ်ထဲမှာ လျှာချင်း လိမ်လိုက် စုပ်လိုက် လုပ်ပေးနေတာ တကယ့် ဆရာမကြီး အလား ၊။ သက်မွန် ရဲ့ နို့ အုံ ကို အကျီ ပေါ် ကနေ ကိုင်လိုက်တယ် ။ သေးလွန်းလှတယ် ။
ဟိတ် .. ကိုကြီး ဧည့်ခန်းကြီးမှာနော် လူတွေ မြင်ကုန်မယ် ´´ အင်း လာ အိပ်ခန်းထဲကို ကိုကြီး ပွေ့ချီသွားမယ် ´´
ကိုယ်လုံးသေးသေး လေး အား အသာ မ ကာ အခန်းထဲ ကို ခေါ်ဆောင် ခဲ့လိုက်တော့တယ် ။ ….
အခန်းထဲ ရောက်တာ နဲ့ ကုတင်ပေါ်မှာ သက်မွန်ကို ဖင်ကုန်းခိုင်းလိုက်တယ် ။ ဖင်ကုန်းထားတဲ့ သက်မွန့် ဂါဝန် ကို အပေါ်ထိ ဆွဲ လှန်လိုက်တော့ အောက်မှာ ပင်တီ အဝါနုရောင်လေး အလယ်မှာ နဲနဲ တောင် စိုနေပီ ။ ပင်တီပေါ်ကနေ အသာဆွဲပွတ်လိုက်တော့ သက်မွန် ခါးလေး တွန့်သွားပီး ညည်းညူသံလေး ပေးလာတယ်
အားးးရှီးးးး ´´ သက်မွန် ခံချင်နေပီလား ´´
အင်း ကိုရဲ လုပ်ပေးတော့ ´´ ပင်တီ ကို မချွတ်တော့ ပဲ ဘေးသို့ အသာဆွဲဖယ်လိုက်တယ် ။ တင်ပါးက သေးသေး မို့ အဖုတ်လည်း သေးမယ်ထင်ထားတာ အဖုတ်က တော်တော် ပြဲပြဲ ရီးစား နဲ့ ဘယ်လောက်တောင် လိုးထားလဲမသိ ။ ကျွန်နော် လည်း အဖုတ် ၀မှာ လီးတံ ကို သွင်းပီး ဒစ်ကို ထိုးမြုပ်လိုက်တယ် ။ ဘယ်အချိန်ထဲက ခံချင်နေသည်မသိ စောက်ရည်တွေ ရွဲနေတာမို့ လီးက အဖုတ်ထဲပလွတ်´´ ကနဲ အသံမြည်ကာ ၀င်သွားတော့တယ်
အားးး ကိုရဲ ၀င်သွားပီ အားးး ကောင်းလိုက်တာ ´´ သက်မွန်ကို ကိုယ်လိုးနေပီ သက်မွန် ´´
အင်းးး လိုးလိုး ´´ အားးး ငါ့ခယ်မလေး ကို လိုးနေပီကွာ ´´
ဟုတ်တယ် ကိုရဲ လိုးး သက်မွန်ကို ကိုရဲ လိုးနေပီ ´´ နောက်ကနေ အားရပါးရ စောင့်လိုး ပစ်လိုက်တယ် ။ အခန်းထဲမှာ လိုးသံတွေ ဆူညံထွက်လာတယ် ။ သက်မွန်ကလည်း တအားအား ဖြင့်အော်နေတော့တယ် ။ လိုးနေရင်း နဲ့ ပင်တီ စ ကို လက်တဘက်က ကိုင်ထားတာ မို့ အားမရတာ နဲ့ ကျွန်နော်လက်နှစ်ဘက်နဲ့ ပင်တီကို ဆွဲ ဖြဲပစ်လိုက်တယ် ဗျိ..ဗျိ ´´
ပင်တီဘောင်းဘီ အကုန်ပြဲထွက်သွားတာ နဲ့ အောက်ကို ဆွဲချလိုက်ပီး ခါးကို ကိုင်ကာ ဆက်စောင့်ပစ်လိုက်တယ်
ဘွတ် ဘွတ် ဘွတ် ´´ အားး အားး အားး ဟူတ်တယ်ကိုရဲ ထိတယ် အင်းးးစောင့်လိုးပေး အားးး´´
ဖတ် ဖတ် ဖတ် ´´ နောက်ကနေ စောင့်နေရတာ ညောင်းလာပီမို့ သက်မွန် ထ ကိုယ့် ပေါ် တက်ခွပီး အပေါ် က စောင့်ပေး ´´
အင်းးး ကိုရဲ ´´ သက်မွန်က ကုန်းနေရာမှ ထကာ ကျွန်နော်က ပက်လက်လှန်လိုက်ပီး အပေါ် မှ တက်စောင့်တော့တယ် ။ တက်စောင့်နေရင်း နဲ့ ဂါဝန်ကို ခေါင်းမှ ဆွဲ ချွတ်ပစ်လိုက်တယ် အားး ခံလို့ ကောင်းတယ် ကိုရဲ ရယ် သက်မွန် ကိုရဲ နဲ့ ခံချင်နေတာ ကြာပီ မမ နဲ့ ကိုရဲ လိုးနေသံတွေ ကြားတိုင်း စောက်ဖုတ်ထဲက တအား ယားတာပဲ ´´
အင်းးး သက်မွန် အားရပါးရစောင့် အားးး ကောင်းတယ် ´´ အင်းးး သက်မွန် နဲ့ မမဇင် ကိုရဲ တို့ လင်မယားလိုးနေသံ တွေကြားတိုင်း အလိုးခံချင်လွန်းလို့ တစ်ယောက်အဖုတ် တစ်ယောက်ပွတ်နေကြတာ ကြာပီ အခုမှ တကယ် ခံပေးရတော့တယ် အားး ´´
သက်မွန်က အပေါ်မှ စောင့်နေရင်း စကားတွေ လည်း တတွတ်တွတ်ပြောနေသေးတယ် ။ ဒီလိုမှန်း သိ အရင်ကတည်းက ခယ်မလေး ကို လိုးပါတယ်ဗျာ ။
ကျွန်နော် အောက်ကနေ ပက်လက်လှန်ပေးထားရာမှ သက်မွန်နို့တွေကို ပါ လှမ်းကိုင်ပီး နယ်ပေးနေမိတယ် ။ သက်မွန် နို့က ဇင်ဇင် နို့တွေလောက်တော့ ကိုင်လို့ မကောင်း ။ သေးနေတယ်။ နို့ကို ကိုင်နေတဲ့ ကျွန်နော့် လက်တွေ ကို သက်မွန် က လှမ်းယူက ပါးစပ်ထဲ ထည့်ကာ တပြွတ်ပြွတ် စုပ်လိုက်သေးတယ်။
အားး သက်မွန်ရယ် ကောင်းလိုက်တာ စောင့်ပေး အားးးရှီးးး´´ အားးး ဘွတ် ဘွတ် ဘွတ် ´´
သက်မွန် ခန အောက်ဆင်းဦး လီးစုပ်ပေးဦးကွာ ´´ အင်းး ကိုရဲ …´´
သက်မွန်က အပေါ်က နေ စောင့်ပေးနေရာမှာ ဘေးမှာ ခပ်ကုန်းကုန်းလေး ဆင်းလိုက်ကာ လီးတံကို စစုပ်တော့တယ်
ပြွတ် ပြွတ် ပြွတ် ´´ အားးး သက်မွန်က လူသာသေးတယ် အမှုတ်အစုပ် အရမ်းကျွမ်းကျင်တယ် အားးး သက်မွန် ကောင်းလိုက်တာ သက်မွန် စုပ်ပေးတာ အရမ်းကောင်းတယ်ကွာ´´
လီးပေါ် တံတွေး ထွေးချလိုက် ပြန်စုပ်လိုက် ဖြင့် သက်မွန်ရဲ့ စုပ်ချက်တွေက မြန်ဆန်လွန်းတယ်
အားးးအားး သက်မွန် အားးးကောင်းတယ် ´´ ပြွတ် ပြွတ် ပြွတ် ´´
ပက်လက်လှန်ရင်းမှာ ခေါင်းကို အသာထောင်ကာ သက်မွန်စက်ပတ် ကို လှမ်းကြည့်လိုက်တယ် ။ အဖုတ်မှာ အရည်တွေ စိုရွဲ နေပီး ပြဲအာအာ လေး ဖြစ်နေတယ်။ ကျွန်နော် ကသာ အခုမှ သက်မွန်ကို လိုးရတာ ဘယ်သူတွေ က ဘယ်လောက်တောင် လိုးထားပီးပြီ လဲမသိ ။
ကိုယ့်ခယ်မလေးမို့ လိုးချင်နေပေမယ့် သိက္ခာ ထိန်းနေရတာ အခုတော့ သက်မွန်က ကိုယ့်ထက်ပင် ပိုတဲ့ ဆန္ဒတွေ နဲ့ လုပ်ပေးနေတယ်။ သက်မွန် စက်ပတ် ထဲကို လက်ညိုးနဲ့လက်ခလယ် နှစ်ချောင်းပူးပီး ထိုးထည့်ပေးလိုက်တယ်
အားး ´´ ပြွတ်ပြွတ် ပြွတ် ´´
ဇွတ် ဇွတ် ဇွပ် ..ဇွပ် ´´ ကျွန်နော့် စိတ်တွေ ထိန်းထားလို့ မရနိုင်တော့ နေ့လည် က လည်း ဇင်ဇင် နဲ့ အပီ လိုးထားတာမို့ အကြာကြီး မထိန်းနိုင်တော့ပဲ စုပ်ပေးနေတဲ့ သက်မွန်ပါးစပ်ထဲ ကို လီးရေတွေ ပန်းထည့်ပစ်လိုက်တယ် အားးး အားးးထွက်ပီ ညီမလေး အားးသက်မွန် အားးး´´
လရေ တွေ ပန်းထွက်လာပေမယ် သက်မွန်က ပါးစပ်ထဲမှ လီး ကို မချွတ်ပစ်ပဲ ဆက်တိုက် ဆက်စုပ်ပေးကာ ကျွန်နော့် လီးရေတွေကို ပါ ယက်ပစ်လိုက်တော့တယ် ။
အားးးကောင်းလိုက်တာ ကိုရဲ´´ အင်းးး ကောင်းတယ် သက်မွန်စုပ်ပေးတာ အရမ်း ကောင်းလွန်းလို့ ထွက်ကုန်တယ် ´´
အင်း ကိုရဲ ခနနားလိုက်ဦးနော် သက်မွန်ရေသွားဆေးလိုက်ဦးမယ် ´´ ဆိုပီး ကုတင်ပေါ်မှ ဆင်းသွားတယ် ။ သက်မွန် နဲ့ ဇင်ဇင် အိပ်တဲ့ ကုတင်ပေါ်မှာပဲ ကျွန်နော် မှိန်းနေရင်း အိပ်ပျော်သွားတော့တယ် အိပ်ယာကနိုးတော့ အပြင်ဘက်မှာ မှောင်နေပီ။ လက်က နာရီကို ကြည့်လိုက်တော့ ည ၈ နာရီတောင်ထိုးနေပီ ။ ဧည့်ခန်းဘက်က စကားသံ သဲ့သဲ့ ကြားနေရသည်မို့ ဇင်ဇင် ပြန်ရောက်နေပီဆိုတာ သိလိုက်တယ် ။ အိပ်ယာထဲက ထကာ အပြင် မထွက်သေးပဲ ရေချိုးခန်းဝင်ကာ ရေချိုးလိုက်တော့ လူက လန်းဆန်းသွားတယ် ။ တရေးတမော အိပ်ထားသည်မို့ အားတွေလည်း ရှိနေသလို ဖြစ်ကာ ရေချိုးရင်း ငပဲက ထောင်မတ်နေတော့တယ် ။ ဆပ်ပြာဖြင့် အသာအယာ ပွတ်သပ်တိုက်ဆေးကာ ရေတဝြကီး ချိုးပီး အ၀တ်အစားလဲကာ ဧည့်ခန်းဘက်ထွက်လာလိုက်တယ်။ ကိုကြီး နိုးပီလား ဧည့်ခန်းထဲမှာ ခြေသည်းထိုင်ဆိုးနေသော ခယ်မလေး သက်မွန်က လှမ်းမေးတယ် ။ ညာဘက်ကို ကြည့်လိုက်တော့ ထမင်းစားခန်းမှာ ဇင်ဇင်က အစားအသောက်တွေပြင်ဆင်နေတယ် ကိုကြီး အားရှိသွားအောင်လို့ တမင် မနှိုးပဲ ထားထားတာ အင်းး…အားကတော့ တအားရှိနေပီ သက်မွန်ရေ .. ရေချိုးလိုက်တော့ ပိုလန်းသွားတယ် ကဲ ပိုအားရှိသွားအောင် ညစာအသင့်ပြင်ထားပီ ယောင်္ကျားရေ.. ဇင်ဇင်က အရွှန်းအဖောက်စကားလေး ဖြင့် ထမင်းစားခန်းကနေ လှမ်းပြောတော့ သက်မွန်က ဟင်းးးး မမဇင်နော် သူ့ယောင်္ကျားလဲ မဟုတ်ပဲနဲ့ တို့ကိုကြီးကိုများ ပိုင်စိုးပိုင်နင်း ဟိဟိ .. မနက်က ငါ့ယောင်္ကျားဖြစ်သွားပီလေ ဟွမ်း ..မမဇင် တစ်ယောက်တည်း ဆိုင်တာမဟုတ်ဘူးနော် သက်မွန်လည်း ဆိုင်ပါတယ်နော် အမလေ..သူတို့နှစ်ယောက်က ဝေစုခွဲနေကြသေးတယ် ။ ခြေသည်းဆိုးတာလက်စသတ်ရင်း သက်မွန်က ကျွန်နော့် လက်မောင်းလေး ကို လာဆွဲကာ ထမင်းစားခန်းထဲ အတူတူဝင်လာလိုက်သည် ။ ကျွန်နော် လည်း အလိုက်တသင့် သက်မွန် ခါးလေးကို ဖက်ထားလိုက်တယ် ။ သုံးယောက်သား ပျော်ပျော်ရွှင်ရွှင် ဖြင့် ညစာ စားလိုက်ကြတယ် ကျွန်နော့် အတွက် အေဘီစီ ပုလင်း တစ်လုံး နဲ့ သူတို့က စပိုင် တစ်ယောက်တစ်လုံးစီသောက်လိုက်ကြသေးတယ် ။ သက်မွန်က ကိုကြီး ..ဒီည ဘယ်မိန်းမ နဲ့ အိပ်မှာလဲ ပြောနှစ်ယောက်လုံး နဲ့ အတူတူ အိပ်မှာပေါ့ ဆိုတော့ သုံးယောက်သား သဘောကျရင်း ရယ်မိလိုက်တယ် အားလုံး စားသောက်ပီးသွားတော့ ဇင်ဇင်က ရော့ ကိုကြီး သောက်လိုက်ဦး ဆိုပီး တော့ပ်ရိုး နှစ်လုံးပေးတယ် ဟ… နှစ်လုံးကြီးတောင်ပါလား အင်းလေ .. နှစ်ယောက်လုံးနဲ့ အိပ်မှာဆိုတော့ နှစ်လုံးသောက်ရမှာပေါ့ ရော့ သက်မွန် ဒါက နင်နဲ့ငါ တစ်ယောက်တစ်လုံး ဆိုပီး ဆေးလုံးသေးသေး လေး တစ်လုံးစီ သောက်လိုက်ကြတယ် ။ တားဆေးပဲ ဖြစ်လိမ့်မည်ဆိုတာ မမေးပဲ သိလိုက်တယ် ။ သိပ်မကြာခင်မှာ ပဲ ကျွန်နော် တို့ သုံးယောက်လုံး အိပ်ခန်းတွင်းကို ရောက်လို့ လာတော့တယ် ။ ဒီတစ်ခါတော့ နေ့လည်က အိပ်ခဲ့တဲ့ သူတို့ အိပ်ခန်းထဲကို မဟုတ်တော့ပဲ ကျွန်နော် နဲ့ ကျွန်နော့် မိန်းမ အကြိမ်ကြိမ် အိပ်စက်ခဲ့တဲ့ ကျွန်နော့် တို့ လင်မယား အိပ်ယာကြီး ထက်ကိုပေါ့ ။ အိမ်ခန်းထဲ ရောက်တယ် ဆိုရင်ပဲ ဇင်ဇင် နဲ့ သက်မွန်က အ၀တ်တွေ အကုန်ချွတ်ပစ်လိုက်ကြတော့တယ် ။ အ၀တ်တွေ တစ်ခုချင်းစီ ချွတ်နေကြပုံကို ကုတင်ပေါ်မှ အရသာခံကာ ကြည့်နေရင်း ကျွန်နော့် ငပဲကလည်း အစွမ်းကုန်မာန်ဖီနေပီ ။ ကျွန်နော်လည်း ပုဆိုး အကျီတွေ ချွတ်ပစ်လိုက်တော့တယ် ။ အ၀တ်တွေ ချွတ်ပီး ကြည့်လိုက်တော့ ဇင်ဇင်နဲ့သက်မွန်က ကုတင်အောက်မှာပဲ မတ်တပ်ရပ်ရင်း တစ်ယောက်နို့ တစ်ယောက် ပွတ်ကာ ကိုယ်လုံးတီး ကိုယ်စီဖြင့် နုတ်ခမ်းတွေ ကစ်ဆင် ပေးနေကြသည် ။ ကျွန်နော်လည်း ကုတင်ပေါ်မှ ဆင်းကာ သူတို့ နှစ်ယောက်လုံးရဲ့ ကိုယ်လုံးတွေကို ဖက်လိုက်ကာ သုံးယောက်သား ကစ်ဆင်ပေးလိုက်တယ် တစ်ယောက်တလဲ ကစ်ဆစ် ပေးနေတုန်း ဇင်ဇင်က ကျွန်နော့် လီးတံကို ကိုင်ကာ ပွတ်နေတုန်း သက်မွန်ကလည်း ကျွန်နော့် ဥလေးတွေကို ခပ်ဖွဖွလေး ပွတ်ပေးနေတော့တယ် ။ ကျွန်နော့် လီးချောင်းကြီးမှာလည်း ဆေးစွမ်းကြောင့်ကော ဘီယာရှိန်ကြောင့်ပါ မာန်ထကာ ထောင်မတ်နေပီ ။ ငါးမိနစ်လောက် ကစ်ဆင်ပေးပီးသွားချိန်မှာ ဇင်ဇင်နဲ့သက်မွန် နှစ်ယောက်သား ဒူးထောက်ထိုင်လိုက်ကြကာ ကျွန်နော့် လီးတံကို နှစ်ယောက်သာ တစ်လှည့်စီ စုပ်ကြတော့တယ် ပြွတ် ပြွတ် ပြွတ် အားးး အာ…အားးးးး လီးတစ်ချောင်းတည်းအား ဇင်ဇင်နဲ့သက်မွန် နုတ်ခမ်း တစ်ဘက်တစ်ချက်စီဖြင့် ပွတ်ဆွဲလိုက်တိုင်း ကြက်သီးများပင်ထလာအောင် ကောင်းနေတော့တယ် ။ ဇင်ဇင် က ကျွန်နော့် လီးတံ ကို ကိုင်စွဲလိုက်ကာ သက်မွန် နုတ်ခမ်းထဲကို ထိုးထည့်ပေးလိုက်တော့ သက်မွန်က နုတ်ခမ်းလေး အသာဟကာ ငုံစွဲလိုက်တော့တယ် အားးး ကောင်းလိုက်တာ အားးး ဇင်ဇင်က ငြီးငြူနေတဲ့ ကျွန်နော့် ကို မော့ကြည့်လိုက်ကာ ခပ်ပြုံးပြုံးလေး ဖြင့် လျှာလေး တစ်ချက်သပ်လိုက်ရင်း အရမ်းကောင်းနေလား ယောင်္ကျား သက်မွန်က အစုပ် မပြတ် အင်းးးး ကောင်းတယ် မိန်းမ အရမ်းကောင်းတယ် အားးး ရှီးးးး မိန်းမ နှစ်ယောက်က ကျွန်နော့် လီးကို အငမ်းမရ စုပ်နေကြတယ် ။ စုပ်နေကြတဲ့ မိန်းမ နှစ်ယောက်ကလဲ တစ်ယောက်က ခယ်မလေး တစ်ယောက်က ယောက်ဖ ရဲ့ မိန်းမ ဆိုတော့ ကျွန်နော့် လီး ဘယ်လောက်တောင် ကောင်းနေမလဲ ဆိုတာ တွေးကြည့်လိုက်ပါတယ်ဗျာ .. ဆယ်ငါးမိနစ်လောက်ကြာအောင် လီးစုပ်တာ ခံပီးနောက် ကျွန်နော်က ကုတင်ပေါ်တက်လိုက်ကာ ပက်လက်လှန်လိုက်တော့ နှစ်ယောက်သား ကုတင်ပေါ် တက်လိုက်လာပီး ဇင်ဇင်က အောက်ပိုင်းမှာ ကျူံ့ကျူံ့လေး ထိုင်ကာ လီးစုပ်တော့တယ် ။ သက်မွန်ကတော့ ကျွန်နော့် မျက်နှာပေါ် တက်ခွကာ သူ့အဖုတ်ကြီးကို ကျွန်နော့် ပါးစပ်ပေါ် တေ့ပေးလိုက်တယ် ။ အောက်ပိုင်းက လီးစုပ်တာ ခံရင်း သက်မွန်စက်ပတ်ကို ဖြဲကာ ယက်ပေးလိုက်တော့တယ် ။ သက်မွန်အဖုတ်ထဲမှ အရည်တွေ လည်း အရမ်းရွဲစိုကာ ထွက်နေပီ ။ ပြွတ် ပြွတ် ပြွတ် အားးး ကောင်းတယ် ကိုကြီး အားးး ယက်ပေး အစိကို စုပ်ပေး အားးးရှီးးးးပြွတ် ပြွတ် ပြွတ် အားးးး ရှီးးး ခနနေတော့ လီးစုပ်နေတဲ့ ဇင်ဇင်က ကျွန်နော့် လီးပေါ် တက်ခွကာ အဖုတ်ဝမှာ တေ့လိုက်ပီး ထိုင်ချကာ တက်စောင့်ပါတော့တယ် ဘွတ် ဘွတ် ဘွတ် အင့် အင့် အင့် အင့် ပြွတ် ပြွတ် ပြွတ် အားးး အားးးအားး ရှီးးးအားးး အမလေးးးအားးးကောင်းလိုက်တာ ယောင်္ကျား အားးး ကျွန်နော့် မျက်နှာမှာလဲ သက်မွန် ရဲ့ စောက်ရည်တွေ ရွှဲနေပီ သက်မွန်ရဲ့ စောက်စိကို ဆွဲဆွဲ စုပ်ရင်း နဲ့ သက်မွန် စအိုလေးကို ပါ လက်ခလယ်လေး ဖြင့် ထုတ်လိုက်သွင်းလိုက်ကာ ကလိပေးလိုက်တော့ သက်မွန်တစ်ယောက် ဖင်ကြီး ကော့ကော့ သွားကာ အားးး အားး ကောင်းတယ်ကိုကြီး အားးး အမလေးးး ဖင်ဝလေးကို လျှာထိပ်လေး နဲ့ စွဲပေးလိုက်တယ် ဆိုရင်ပဲ သက်မွန်တစ်ယောက် ကုတင်ဘောင်ကို လက်လှမ်းထောက်ကာ တင်ပါးကြီး ကော့ကော့သွားကာ ဖျက်ဖျက်လူး ဖြစ်သွားတော့တယ် ။ အောက်မှ ဇင်ဇင် ရဲ့ စောင့်ချက်တွေကလည်း ပိုပိုပြင်းထန်လာတယ် ။ အားးး ကောင်းတယ် အားးဘွတ် ဘွတ် ဘွတ် အားးး ရှီးးးးးအားးးအားးး ကိုကြီး သက်မွန်ကို တလှည့် လိုးပေးဦး မနေနိုင်တော့ဘူး အင်းးး သက်မွန် ဖင်ကုန်းလိုက်နော် သက်မွန်တစ်ယောက် ကျွန်နော့် မျက်နှာပေါ် တက်ခွနေရာမှ အောက်ကို ဆင်းလိုက်ပီး ဖင်ဘူးတောင်းထောင်ကာ လေးဘက်ကုန်းလိုက်သည် ။ ဇင်ဇင်ကလည်း အလိုက်တသိ အပေါ်မှ တက်ခွစောင့်နေရာမှ ဆင်းလိုက်တယ် ဘလွတ် အသံနဲ့အတူ ဇင်ဇင့် စောက်ဖုတ်ထဲမှလီးတံကြီး ကျွတ်ထွတ်သွားသည် ။ လီးတံကို ငုံကြည့်လိုက်တော့ လီးတံတလျောက်မှာကော ဥတွေမှာပါ ဇင်ဇင့်စောက်ရည်တွေ ရွဲနေတယ် ။ လီးတံမှ စောက်ရည်တွေကို သက်မွန် ရဲ့ ဖင်ဝမှာ သုတ်လိမ်းပေးလိုက်ရင်း စအိုဝလေးကို ဒစ်ဖျားလေး နဲ့ ဖိကာဖိကာ ပွတ်ပေးလိုက်တယ် သက်မွန် ..ကိုကြီး သက်မွန် ဖင်ကို လိုးမယ်နော် ဆိုတော့ အင်းး…ကိုကြီး ကြိုက်သလိုလုပ်ကွာ ဆိုပီး ဖင်လေး ကော့ပေးတော့တယ် ။ ခယ်မလေး ကို ဖင်လိုးရတော့ မယ် ဆိုတဲ့ အသိကြောင့် လီးဒစ်ကြီး တောင် ပိုကားလာသလို ခံစားလိုက်ရတယ် ဇင်ဇင် ..သက်မွန် ဖင်ကို နဲနဲ ဖြဲထားလိုက်ကွာ ဟုတ် .. ယောင်္ကျား ပီးရင် ဇင့်ကို လည်း ဖင်လိုးပေးနော် `ဟားးးး ရတယ် ဒီည ငါ့မိန်းမ အသစ်ကလေး နှစ်ယောက်လုံးကို ဖင်ကော အဖုတ်ကော ပါးစပ်ကော အကုန်လိုးပေးမယ် စိတ်ချ
ဇင်ဇင်က သက်မွန်တင်ပါး နှစ်ခြမ်းကို ဆွဲဖြဲလိုက်တယ် ။ စအိုညိုတိုတိုလေး ပွစိပွစိ ဖြင့် နဲနဲ ဟသွားတာ နဲ့ လီးဒစ်ကို ဖြေးဖြေးချင်း ထိုးသွင်းပေးလိုက်တယ်
အားးး ကိုကြီး အားးး နာတယ်
အင်း အင်း ကိုကြီး ဖြည်းဖြည့်သွင်းပေးမယ်နော်
အားး လီးဒစ်ဝင်သွားပီ အားး
လေဘက်ကုန်းထားရင်း သက်မွန်တစ်ယောက် အိပ်ယာခင်းစတွေကို လက်နဲ့ ကျစ်ကျစ် ပါအောင် စုပ်ကိုင်ထားမိတယ် ဖင်ဝမှာ တစ်စို့စို့ကြီး ဖြစ်နေတယ် ဖြေးဖြေးချင်းဝင်သွားသော လီးတံတလျောက် ဖင်စအို ဘေးသားလေးတွေပါ ကပ်ပါသွားတယ် ။
သက်မွန် အကုန်ဝင်တော့မယ် ဆက်သွင်းမယ်နော်
အင်းး လုပ် အားးး
တဖြည်းဖြည်း လီးတံက သက်မွန် စအိုထဲသို့ တစ်ချောင်းလုံးဝင်သွားတော့တယ်
ဇင်ဇင် သက်မွန်ဖင်ဝပေါ် တံတွေး ထွေးပေးလိုက် အသွင်း အထုတ် လုပ်တော့မယ်
အင်း အင်း.. ပျစ် ..
ဇင်ဇင်က လီးဝင်နေတဲက သက်မွန် စအိုပေါ်ကို တံတွေး ထွေးချလိုက်တယ် ။ ကျွန်နော်လည်း သက်မွန် ခါးသိမ်သိမ်လေးကို ကိုင်ကာ ဖြေးဖြေးချင် လီးတံကို ပြန်ဆွဲထုတ်လိုက် ဖြေးဖြေးချင်း ပြန်သွင်းလိုက်ဖြင့် တော်တော်ကြာနေတော့ အဆင်ချောလာတယ် တဖြည်းဖြည်း အရှိန်မြှင့်ကာ အထုတ်အသွင်းလုပ်နေချိန် ဇင်ဇင်က သက်မွန်ပေါင်ကြားထဲလက်ထည့်ကာ စောက်ဖုတ်ကို ကလိပေးနေတော့တယ်။
သက်မွန်တစ်ယောက် ဖင်လိုးခံရင်း အဖုတ်ကလိပေးခံနေရတာကြောင့် ကာမစိတ်တွေ ပိုပို ဖြစ်လာကာ သူမ ဖင်ကြီးကို ပိုကော့ကော့ပေးနေမိတယ်
အင်းးး အင့် အားးး ရှီးးး
အားးး ကိုကြီး ကောင်းလိုက်တာ လိုး အားးးစောင့်လိုးပေး ခံလို့ကောင်းနေပီ
အင့် အင် အင့် ရော့ ရော့
အားးး အမလေးးအားးးကောင်းလိုက်တာ သက်မွန်ဖင်က စီးကြပ်နေတာပဲ အားးး
သက်မွန်လည်း ဖင်သားတွေက လီးတံကို ပြန်ပြန်ညှစ်ပေးနေမိတယ်
ဘွတ် ဘွတ် ဇွပ်
အားးအားးး သက်မွန် ဖင်ကို ကိုကြီး လိုးနေပီ အားးကောင်းလိုက်တာ အားးး
အင်းးကိုကြီး လိုးပါ အားးးသက်မွန် ဖင်ခံပေးနေတယ် အားးး အမေ့ အားးး
ဆက်တိုင် စောင့်လိုးနေတာကြောင့် ဖင်ဝမှာ ပိုကျယ်လာကာ အဆင်ချောလာချိန်
ယောင်္ကျား ဇင့်ကိုလည်း ဖင်လိုးပေးဦးလေ
ဆိုကာ သက်မွန်ဘေးနားမှာ ဇင်ဇင်က ဖင်လာကုန်းတယ်
အင်းး လာခဲ့ ငါ့မိန်းမ အသစ်လေး နှစ်ယောက်လုံး ဖင်တလှည့်စီ ချပေးမယ်
ဟု ဆိုကာ ဇင်ဇင့် ဖင်ဝကိုလီးတံ တေ့ပီး ထိုးသွင်းလိုက်တော့တယ်
အားးး ယောင်္ကျားးအားးအို…ကြပ်တယ် အားးးအမလေးးးးအားးး
အသစ်စက်စက် စအို နှစ်ပေါက်ကို ချနေရတာကြောင့် လီးတံတောင် ကျိန်းစပ်လာတယ် ။ ဇင်ဇင့် ဖင်ကို လိုးနေရင်း သက်မွန် စောက်ဖုတ်ကို လက်တစ်ဘက်ဖြင့် ကလိပေးနေလိုက်တယ် ။ အခန်းထဲမှာ လိုးသံတွေ အော်သံတွေ ဆူညံနေတော့တယ် ။
အားးး ကောင်းတယ် အားးရှီးးး
ဗျစ် ဗျစ် ဗျစ်
ဖတ် ဖတ် ဖတ် ဖတ်
အားးး ယောင်္ကျား အားးး အမလေးးးအားးး လိုးပါ ဖင်ကွဲချင်ကွဲပါစေ လိုးပါ အားးစောင့် စောင့်
သက်မွန် စောက်ဖုတ်ကို ကလိနေရင်း ညလက်ဖြင့် ဇင်ဇင့် တင်ပါးကြီး ကို ခပ်ဆက်ဆက် ဖြောင်းခနဲ တစ်ချက်ရိုက်ပစ်လိက်တယ် တင်ပါးကြီးတဲ့ ဇင်ဇင်ရဲ့ တင်းပါး ကြီး မှာ ရဲခနဲ လက်ရာကြီး ထင်သွားပီး တင်းပါးသားတွေ တုန်ခါသွားတယ်
အားးးး ကောင်းတယ် ရိုက်ပါ အားးး ဇင့်ဖင်ကို ချ အားးး
ဖြောင်း ဖောင်း ဖြောင်းးး
ဘေးမှ သက်မွန် တင်ပါး ခပ်သေးသေးကို ပါ တစ်ချက် ရိုက်ပစ်လိုက်တယ်
အားးး ကိုကြီး အားးး သက်မွန် ထဲ ထည့်ပေးဦး
ဟု ဆိုလာသဖြင့် ဇင်ဇင့် ဖင်ထဲမှ လီးတံကို ချွတ်လိုက်ကာ သက်မွန် စောက်ဖုတ် ထဲ ထည့်လိုးလိုက်ပြန်တယ်
အားးး ကောင်းလိုက်တာ အားးး လိုးလိုး အားးး
အမလေးး သက်မွန် ရယ် ကောင်းလိုက်တဲ့ စောက်ဖုတ် အားးး
အားးး စောင့်ပါ ကိုကြီး လိုးလိုး တအားစောင့် အားးးကောင်းတယ်
အင့် အင့် ရော့ ရော့ ဘွတ် ဘွတ် ဘွတ်
အားးး ငါလိုးမ ခယ်မလေး စောက်ဖုတ် အားးးအင့် အင့် အင့်
အားးးလိုးပါ ကိုကြီး စိတ်ကြိုက်လိုး သက်မွန် ကိုကြီး လီးနဲ့ ခံချင်နေတာကြာပီ အားးးလိုး အားးး
အားးးကောင်းတယ် လာဇင်ဇင် သက်မွန် နဲ့ အောက်ကို ၀င်ပီး ထပ်ထားလိုက် အတူတူ လိုးပေးမယ်
ဇင်ဇင်လည်း သက်မွန် အောက်ကို တိုးဝင်လာပီး အဖုတ်ချင်းထပ်ထားလိုက်တာမို့ သက်မွန်ကို တလှည့် ဇင်ဇင့်ကို တလှည့် အဖုတ်လိုးပေးလိုက်တယ်
ဇွပ် ဇွပ် ဇွပ်
အားးး လိုးပါ အားးး
အင့် ရော့ ရော့ အားးး
နာရီဝက် ကျော်ကျော်လောက်ထိ လိုးလိုက်ပီး လီးတံတလျောက် ကျင်တက်လာကာ ပီးချင်လာသလိုဖြစ်လာတယ် ။
အားးအားး ကိုကြီး ပီးတော့မယ် အားးးး
ဇင်ဇင့် စောက်ဖုတ် ထဲမှ လီးတံ ကို ဆွဲချွတ်လိုက်ပီး ကုတင်ပေါ်မှာ မတ်တပ်ရပ်လိုက်တယ်
ထ ..နှစ်ယောက်လုံး ဒူးထောက်ထားလိုက် မျက်နှာပေါ် လရေ ပန်ပေးမယ်
ပြောလိုက်တော့ ဇင်ဇင်ရောသက်မွန်ပါ နှစ်ယောက်သား ဒူးထောက်ထိုင်ကာ ပါးချင်းအပ်လျက် ကျွန်နေ်ာ့လီးတံရှေ့မှာ လျှာလေး တွေ ထုတ်ထားကြတယ် စောက်ရည်တွေ ဖြင့်ချောမွတ်နေတဲ့ လီးတံကြီးကိုကိုင်ကာ ဇင်ဇင် နဲ့ သက်မွန် မျက်နှာရှေ့မှာ လေးငါးချက် ဂွင်းတိုက်လိုက်တာ နဲ့ လရေတွေ ဖျောခနဲ ဖျောခနဲ သက်မွန်နဲ့ ဇင်ဇင့် မျက်နှာတွေပေါ်ကိုပန်းထွက်ကုန်တော့တယ် ။
အားးး အားးးအူးးးးးးး ထွက်ပီ အားးးး
ကျွန်နော့် ဥလေးတွေကို လှမ်းကိုင်ရင်း ဇင်ဇင်က ကျွန်နော့် လီးတံကြီးမှ လရေတွေကို စွဲစုပ်တောတယ် ။ နှစ်ယောက်လုံး မျက်နှာပေါ်မှာ လရေဖြူပျစ်ပျစ်တွေ ရွဲစိုကုန်တောတယ်
အားးး ကိုကြီးမိန်းမ မိုး နဲ့ လိုးရတာတောင် ဒီလောက်မကောင်းဘူးကွာ
လီးတံကို ဇင်ဇင့် ပါးစပ်ထဲမှာ ချွတ်ကာ ကုတင်ပေါ်တွင် ဒူးတွေညွတ်ကျကာ လှဲချလိုက်ရင်းပြောလိုက်တယ် ဇင်ဇင်နဲ့ သက်မွန်ကတော့ တစ်ယောက်မျက်နှာပေါ်တစ်ယောက် လျှာဖျားလေးများဖြင့် ပေနေသောလရေ လက်ကျန်များကို ယက်ပစ်လိုက်ကာ မျိုချလိုက်ရင်း ကျွန်နော်ဘေး တစ်ဘက်တစ်ချက်တွင် လှဲလိုက်ကြတော့တယ် ။
ဇင်ဇင်လည်း အရမ်းကောင်းတယ် ယောင်္ကျားရယ် မမမိုး ပြန်မလာခင်ထိ ကိုကြီး မိန်းမ အဖြစ်နေမယ်နော်
ဟိတ် … မမဇင် နော် အဲ့လို မရပါဘူး သက်မွန်လည်း နေဦးမှာပေါ့
အင်းပါ မိန်းမလေးတွေရယ် မိုးပြန်မလာခင်ထိ ဇင်ဇင်ကော သက်မွန်ကော နှစ်ယောက်လုံးကို ညတိုင်း လိုးပေးပါ့မယ် နှစ်ယောက်လုံး ကိုကြီး မိန်းမ တွေ ပါပဲနော်
သုံးယောက်သား သဘောကျစွာ ရယ်မလိုက်တယ်
ဒါနဲ့ သက်မွန်က အလိုးခံဖူးတာလား ကိုကြီးက သက်မွန် ကို အပျိုလေးပဲ မှတ်နေတာ
ဟွမ်းးးး ကိုကြီး တို့လင်မယား လိုးနေသံတွေကြားပီး မနေနိုင်လို့ ရည်စားထားပီး ခံဖြစ်ခဲ့တာပါ ဒါပေမယ့် အခုမှ ကိုကြီးကို ပထမ ဆုံး ဖင်ပါခံပေးဖူးတာပါနော်
ဟုတ်လားး ဒါဆို သက်မွန်ဖင်က ကိုကြီး လီး ပထမ ဆုံး ၀င်ဖူးတာပေါ့နော် ခံလို့ကောင်းလား ဖင်လိုးတာ
အင်းပေါ့ အစတော့ မကောင်းဘူး နာ တယ် ခံရင်း နဲ့ ကောင်းလာသလိုပဲ
ကောင်းလို့ ခံတာပေါ့ ယောင်္ကျားရယ်
ဇင်ဇင် ကော လီး ဘယ်နှချောင်း ခံဖူးတာလဲ
ဟွမ်း ပြောတော့မယ် ဇင်က ယောင်္ကျားနဲ့ ဟော့ဒီ ယောင်္ကျား အသစ် လေး နဲ့ နှစ်ချောင်းထဲ ခံဖူးတာပါနော်
ကဲ ဇင် တို့ ရေသွားဆေးတော့မယ်
ဟုဆိုကာ ဇင်ဇင် နဲ့ သက်မွန် တစ်ယောက်ခါး တစ်ယောက်ဖက်ကာ ရေချိုးခန်းအတွင်း လှုပ်လီ လှုပ်လဲ့ ဖြင့် ၀င်သွားကြပါတော့တယ် ။ ဇင်ဇင် နဲ့ သက်မွန်ရဲ့ နောက်ကျောပြင် အလှလေးတွေကို ငေးကာ
အွမ်းးးး ငါတော့ မိန်းမ ပြန်မလာခင်ထိ ရွှေရည်စိမ် လွတ်လပ်ရေးကို ခယ်မလေးနဲ့ ဇင်ဇင် တို့ ဖင်တွေ အဖုတ်တွေ ပါးစပ်တွေကို အားရပါးရ လိုးရင်း ကုန်ဆုံးရမှာပဲ
ဟုတွေးကာ တစ်ယောက်တည်း ပြုံးမိလိုက်ပါတော့သည် …..
“” အမှောင်ထဲမှာ ဆွဲခဲ့သည် “”
ဂေါ် စွံတယ်ခေါ်မလားပဲ (စ/ဆုံး)👈